सरकारलाई धन्यवाद दिन उभिएको हुँ, एमसीसीबारे बोल्नुपर्‍यो : प्रदीप गिरी | Ratopati
‘फ्युजन गर्ने नाममा एक भएका थियौँ, हामीले कन्फ्युजन बनाएका रहेछौँ’
नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं नेपाली राजनीतिमा प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका प्रदिप गिरिले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा मन्तव्य दिँदै गर्दा पूर्ववक्ता भीम रावलले एमसीसीबारे उठाएका प्रश्नहरुको डिफेन्स गर्न खोजेजस्तो देखियो । तर, गिरीले एमसीसीको खासै बचाऊ गरेनन् । बरु भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरुलाई हेर्ने साझा नीति बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिले यस खास सन्धीबारे म खास टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । हामी आत्मनिर्भर बन्दा विदेशीको सहायताबिना पनि बन्न सक्छौं । हामीले हाम्रो देशका संशाधनलाई माल पाएर, चाल नपाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेका छौं’ काँग्रेस सांसद गिरिले संसदमा भने ।
गिरिले भीम रावलको मन्तव्यतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘म मुख्यतः आज मैले ५५ वर्षदेखि चिन्दै आएको हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँ भनेर उभिएको हुँ ।...मभन्दा पूर्ववक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्तै गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो ।’
प्रस्तुत छ, प्रदीप गिरिको मन्तव्यको सम्पादित अंश उनकै शब्दमा :
सभामुख महोदय सर्वप्रथम समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । म मुख्यतः आज मैले ५५ वर्षदेखि चिन्दै आएको हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँ भनेर उभिएको हुँ । शुभकामनाका साथ केही संशय पनि छन् । त्यसलाई पनि व्यक्त गर्नु मेरो अभिप्राय थियो र छ । तर, मभन्दा पूर्ववक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली सांसद (भीम रावल) ले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्तै गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो ।
उहाँले दिनुभएको मनसायबारे म प्वाक्क बोल्ने छैन । तर, म उहाँ माननीयज्युलाई र संसद्मा रहनुभएका यावत् व्यक्ति र शक्ति, सांसद् र दलहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु–उक्त सन्धी (एमसीसी) को प्रयास अमेरिकाबाट आएको छ, यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला वा आइसकेको होला । चीनबाट आउला अथवा आइसकेको होला । युरोपेली युनियन एउटा शक्तिका रुपमा अघि बढेको छ, त्यहाँबाट पनि आइसकेको होला ।
यो राजनीतिक विषयमात्रै होइन, ठूलो सांस्कृतिक विषय छ । तर, त्यता जाने समय मलाई आज छैन । अहिले म के भन्छु भने भारत, चीन र अमेरिका, अर्को शक्तिका रुपमा आकांक्षी युरोपेली युनियनदेखि जापानसम्म, ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यस्तो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ ? मेरो सानो प्रश्न छ ।
चाहे अमेरिका हेर्नुस, चाहे भारत हेर्नुस्, चाहे चीन हेर्नुस् । ठीक छ, बेठीक छ, उनीहरुको नेपालप्रति आफ्नै दृष्टिकोण छ । त्यो ठीक छ, कि बेठीक छ भन्दिनँ । त्यो ज्यादा बेठीक नै होला । बेठीक किन छ भने हामी नेपालीले राजनीतिक दलको दबदबामा, चकचकीमा, देशमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र चलिरहेका बेलामा, पछिल्लो सर्वोच्च अदालत अपवादका रुपमा आएको छ । यो दलतन्त्रमा हाम्रा दलहरु किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन् ? पूर्ववक्ता माननीयले जति सारगर्भित कुरा राख्नु भए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ । जबसम्म मुलुकका सबै दलहरु, सरोकारवालाहरु साझा विदेश नीतिप्रति प्रतिवद्ध हुँदैनन्, हामीमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर, उच्चा देखाएर मुखको तीतोमात्रै पोख्छौँ ।
अहिले यस खास सन्धीबारे म खास टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । हामी आत्मनिर्भर बन्दा विदेशीको सहायता बिना पनि बन्न सक्छौं । हामीले हाम्रो देशका संशाधनलाई माल पाएर, चाल नपाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेका छौं ।
कोही प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्, कोही मन्त्री अपवाद छैनन् । उनीहरुले आफ्नो आत्माभित्र चिहाएका छैनन् । मुलुकभित्र हेरेका छैनन् । बाहिर–बाहिर मात्रै हेरेका छन् । लिने कुरामा पनि, दिने कुरामा पनि ।
म उभिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई र शुभकामना दिन र सम्झना पनि गराउन । सम्झना गर्नुहोला, दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि, दोस्रो आन्दोलनको जनादेशका बेलामा हाम्रा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा नै २०६४ सालको अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यस अन्तरिम संविधानका वाहक र परिचालक को थिए त ? सबैतिर अनुहार मोटामोटी रुपमा, अहिलेको सरकारमा सामेल छन् । दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्ध थाल्नु भएर अन्ततः १२ बुँदे सम्झौतामा पुग्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता, सभामुख समेत त्यसको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । मधेस आन्दोलनका नाममा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता । एमाले पनि सहयात्री थियो । एमालेको त्यस समयको नेतृत्व, अहिले पनि कार्यकर्तापंक्तिमा टाउको गन्दा सांसद्भन्दा बढी हैसियत राख्ने वर्तमान यस गठबन्धनका सहयोगी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सबै यहाँ छन् । सँगसँगै दलको तानाशाहीभन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गर्ने कतिपय सांसद् पनि ।
यो गठबन्धन किन ? यस गठबन्धनका प्रत्येक सरोकारवालाले, प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झनुपर्&zwj;यो – गणतन्त्रको घोषणापछि, संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरुमा किन जनतालाई बल्ल हाम्रो पालो आएछ भन्ने लाग्ने ? लाखौँका रुपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रने नेपाली जनतालाई किन लागेन, ए अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ ? यस मोर्चाका सबै संगठकले खासगरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवजीले, माधव नेपालले सबैले सोच्नुपर्&zwj;यो, विगत १० वर्ष कसरी गएछ ? के सपनै सपनामा गयो ?
यो मैले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भनेको छैन । स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो । मुख्य कुरो के थियो, माग ? उर्दूमा एउटा राम्रो कविता छ, पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि खयज अहमदले लेखेको – जुन बिहान होला भनेर हिँडेका थियौं, हामी । त्यो बिहान त्यो, रहेनछ । अर्कै पो समय आएछ त ।
हिन्दीका कविले भनेका छन् – कहाँ तो तय था चराग&THORN;ाँ हर एक घर के लिए..
आम जनतामा जुन निराशा खाएको छ । नागरिक आन्दोलन तात्दै हिँडेको छ । त्यसलाई बिर्सिएर सर्वोच्च अदालतका विगतका दुई फैसलामा रमाउने काम नगर्नुस् ।
संघीयताको कुरा मधेसी पार्टीले उठाएको थियो । त्योभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो । तर, आज पनि संघीय राज्य कागजमा सीमित छ । सम्झना गराउन चाहन्छु, सरकार जोसुकैको बनोस् । कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ ? यस विराट मोर्चा सफल होस् । ठीक, त्यस्तै अहिले पनि संघीय राज्यलाई चाहिनेखाले निजामति ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन । यो सरकारले त्यो काम गरोस् ।
यो अवश्य हो, वर्षौंदेखि बिग्रिएको बेथिति एकैदिनमा बन्न सक्दैन । त्यस्तै, हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारेमा फैसला गर्दा १ सय दिनलाई ‘हनिमुन’ भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला । मुख्य कुरा हाम्रो लक्ष्य के हो ? मञ्जिल के हो ? लक्ष्य र मञ्जिल, हामीले बडो सकस गरेर, प्रयास गरेर संविधानलाई जोगाएका छौं । याद रहोस्, सभामुख महोदय, म त्यो एक्लो सांसद् हुँ, नेपाली कांग्रेसभित्रबाट, जसले संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानका विसंगति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटिमा समेत आपत्ति जनाएर संसद्को अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ । यो संविधानमा मेरो हस्ताक्षर छैन । तर, यसका बाबजुद यो संविधान बहाली हुनुपर्छ । संसद् बहाली हुनुपर्छ भनेर तर्क गर्नेहरुमध्ये हामी केही साथीहरु थियौं । किन त ? किन त्यसो गर्नुप¥यो ?
दिनानुदिनका समस्या छन् । उदाहरणका लागि खोपको कुरा आयो । हो, खोप खोप खोप नै आवश्यक कुरा हो । यतिमात्र होइन, सुशासन त्यति नै आवश्यक छ । सुशासन नहुने, खोप नआउने, संविधानले बारम्बार चुनौती पाउने, विगत प्रधानमन्त्री नै सही, उहाँले संविधानसँग खेलबाड गर्ने त्यत्रो आत्मविश्वास कहाँबाट ल्याउनुभयो ? यसकारण ल्याउनुभयो, उहाँकै कारणले सही, उहाँलाई थाहा थियो । आमजनता सरकारसँग, राज्यसँग, यो संविधानको कार्यान्वयनसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
अर्कोतर्फ, एकदलीय व्यवस्था चलाउने, त्यसलाई नयाँ जनवाद भन्ने । तर, सानो आन्दोलन पनि नगरी सोभियत युनियन हट्नुपर्ने, चीनको भविष्य पनि के हुन्छ ? थाहा छैन ।
मैले यहीँ (संसद) बाट चेतावनी दिएको थिएँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई । लोकतन्त्र भनेको संख्यातन्त्र होइन । यो कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभयो । अब यस सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको मार्यादालाई राख्दै लोकतन्त्रको मर्ममा पुग्दै, लोकतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी कसरी बनाउने ? यो दायित्व नेपाली कांग्रेसको र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हो । लोकतन्त्रको जनसुत्रवादी व्याख्याबाट हामी उठ्नुपरेको छ ।